Patent Nyowani yeMining-Inoenderana neCapacitor yakaiswa muKutanga kwaJanuary 2020
Kubudiswa Kweboka | Wuxi, China | Chikumi 11, 2020
Musi waNdira 03, 2020, Wuxi CRE New Energy Technology Co, Ltd yakaita chikumbiro chekunyorera faira nyowani yeDC-Link simbi firimu capacitor inoshandiswa mukuputika-humbowo hwakasanganiswa frequency inoshandura migodhi yemarasha. (Nhamba Patent: 2019222133634)
Wuxi, Jiangsu (June 11, 2020) - Kunyangwe mashandisirwo enzvimbo inoshandurwa mumigodhi iri nguva pfupi yadarika kana zvichienzaniswa neavo vari mune dzimwe nzvimbo, kudiwa kwemusika kwave kuchikwira kwemakore mashanu apfuura. Kukura kweiyo frequency inoshandura kumigodhi kuri kunyanya nekuda kwemidziyo yechinyakare yemagetsi ichitadza kugutsa zvinodikanwa zvekugadzira maindasitiri.
Idzo zvishandiso zvekare zvakakura zvine hukuru hukuru, kushaya simba, kushandisa simba kwakawanda, kubuda zvakanyanya kwebhabhoni uye kushomekana kwekuputika-chiratidzo chekugona kwenzvimbo inoshanda yakaoma. Mukuwedzera, ivo vanotora nzvimbo yakakura yekushanda uye vanowanzoda yemagetsi control system uye neoini pressure system. Mukupesana, yakasanganiswa frequency converter idiki muhukuru kuchengetedza inofungidzirwa kushanda nzvimbo. Izvo hazvivimbi kune mamwe masisitimu kushanda zvakare. Isimba remagetsi uye tambo ndizvo zvese zvarinoda kuita.
Nekudaro, yakanyatsogadzirwa firimu capacitor yeavo akabatanidzwa emigodhi frequency converters anozadzisa maitiro ataurwa pamusoro apa anoita basa rinokosha. Kazhinji, DC-Link capacitor inoshandiswa mukuputika-chiratidzo chakabatanidzwa frequency converter kumigodhi ichabatanidza akawanda akajairwa mafirimu capacitors mukate kana parutivi, rimwe nerimwe rakapetwa nealuminium silinda shell. Iyi nzira sezviri pachena ichiri kuda hukuru hwechigadzirwa uye nzvimbo yakakura yekushanda, tisingatauri zvisingaitike zvekufambisa kazhinji nekuda kwekuremerwa kwayo.
Kupa zvakavimbika uye zvemhando mhinduro zvinogara zviri pamberi pekutanga kweWuxi CRE Nyowani simba. Kuti agadzirise izvi zvakashata zvehunyanzvi zvakaunzwa nenzira yechinyakare zvataurwa pamusoro apa, CRE Nyowani Nyowani yakagadzira zvekare DC-Link simbi firimu capacitor yakanyatsogadzirirwa dhizaini yekubatanidza kushandura kuitira migodhi yemarasha.
Mukati, inosanganisa maviri capacitor cores mune rimwe chete zera uye vatengesi capacitor bobbins mune yebhazi bar chimiro iyo inonyanya kuderedza huwandu hwese. Zvakare, iyo capacitor macores yakaiswa nemhepo yakaomeswa polypropylene firimu inosanganisira iyo capacitor electrodes uye polypropylene firimu dielectric. Ma electrodes ari maaruminiyamu marita akafukidzwa nehupfu-akaiswa polypropylene firimu. Iyi simbi yemhepo yakasimudza tekinoroji inowedzera iyo capacitor cores 'kuramba simba rakanyanya uye pamusoro pezvazvino, inogadzirisa kupisa inogadzirwa, inowedzera hupenyu hwehupenyu uye inoderedza saizi kunyange zvichikwira. Nekunze sezvese, isu takaisa runyorwa rwekugadzira dhizaini kudzikisa iwo muviri wemuenzaniso saizi
Musi waNdira 03, 2020, Wuxi CRE Nyowani Energy Technology Co, Ltd yakaita chikumbiro chekunyora faira reyi itsva simbi firimu capacitor inoshandiswa mukuputika-chiratidzo chakabatanidzwa mumigodhi chinowanzoshandurwa (Patent Nhamba: 2019222133634). Parizvino, CRE New Energy ine makumi maviri anoshanda mvumo, 6 mvumo iri kuita chirongwa chekusimbisa pamwe neiyi nyowani. Mamwe akawanda anotarisirwa kutevedzera mukufamba kwenguva. Isu tinovimbisa, uye tinonunura.
Kuti ubvunze zvimwe,
Ndokumbira ubate maneja wedu wekutengesa, Li Dong (Liv), dongli@cre-elec.com
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyi patent nyowani,
ndapota shanya http://cpquery.sipo.gov.cn/ kana http://www.sipop.cn/module/gate/homePage.html uye tsvaga iyo patent nhamba 2019222133634 kana zita rekambani na “无锡 宸 瑞 新 能源 科技 有限公司”. Kusvika pazuva rechinyorwa chino, iyo tsananguro yakazara yeiyo patent haisati yawana kune yeruzhinji uye ichave inowanikwa mushure mekuita nenzira yekusimbiswa munguva pfupi iri kutevera. Iwe unogona kusangana nesu zvakananga kuti tikurukure zvimwe. Tinokumbira ruregerero nekuda kwekunetsa uye tinokutendai nezvamunofarira.